ဘဝရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းရင် ဒိုင်ယာရီ မှတ်စုလေး အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
Virus Program စုစည်းမှု
ဖြစ်ရပ်မှန် (၁) ဒီအဖြစ်အပျက်လေးက အညာမြို့လေးတစ်မြို့မှာ တကယ်ဖြစ်ပျက် ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် မုံရ...
၁၊ ဗုဒ္ဓပညာ (ရွှေညဝါ) နန္ဒာသိန်းဇံ ၂၊ အမေစားသော ထမင်းတစ်နပ် ဦးသုခ ၃၊ အဘိဓမ္မာမှပေးသော ဘဝအမြင် (ရွှေညဝါ)ဒေါက်တာ မင်းတင်မွန် ၄၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ ...
almost 5,000 people killed by muslims in the past4years, demanding WHAT ELSE? SECESSION !! wow big fucking surprise. They have been...
သွေးအုပ်စု လေးမျိုးထဲက အေသွေ သွေးအမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ခန့်မှန်းလို့လည်း ရပါတယ်..ဒီနေ့တော့ သွေးအုပ်စု လေးမျ...
ဘင်္ဂလားအော်ကိုဖြတ် ရိုးတောင်ကိုကျော်လျှက် မြန်မာတပြည်လုံး ၀ါးမြိုရန်ကြိုးမမ်းနေကြသည့် ရခိုင်တုများ
ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ ကျမရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥကလာပက မိကောင်းဖခင်သားသမီးပါ၊ မယုံယင် ကျမတို့မိသားစု ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ပါ၊ ကျမအခုဒကရောက်လာလို...
တင်ပြသူ ။.....။ . ။.....။စာတင်ချိန် ။...။ Friday, March 09, 2012
ခေါင်းစဉ်လိုက် ။...။ ရင်တွင်းဖြစ်
သို့ ...... ၈၈ -ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး
တင်ပြသူ ။.....။ . ။.....။စာတင်ချိန် ။...။ Tuesday, January 17, 2012
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကိုမြအေးကို ပြောပေးပါ။ ခင်ဗျာသမီး တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားနေတယ်လို့။ ကိုမြအေးကို ကျနော်က နိုင်ငံရေးသမားတယောက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက် ဘ၀မှာ ပေးဆပ်နိုင်မှုထဲက တကယ်လူထုအတွက် စွန်လွတ် အနစ်နာခံတဲ့ သူမို့လို့ လေးစားပါတယ်။
သူသမီး ဝေနှင်းပွင့်သူကိုလည်း လေးစားမိခဲ့တယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ရှေ့မှာ စကားပြောသွားတဲ့နေကဆိုရင် အို.. ကိုယ်တို့ မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကို ဒီလောက်အသက်အရွယ်ကလေးနဲ့ လုပ်နိုင်ပါလားလို့ လေးစာမိတယ်။ အခုက စင်ပေါ်ကို တင်ခါစပဲ ရှိသေးတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိသေးတဲ့ လူမျိုးတမျိုးကို လူမျိုးစုစာရင်းသွင်းပြီးတော့ နယ်မြေဖဲ့ပေးမဲ့ ကိစ္စမှာ သူပါဝင်နေတယ်။ အဲဒါကြောင်း ကိုမြအေးခင်ဗျာ.. အစ်ကို ထောင်ထဲမှာ ရှိတုန်းက နိုင်ငံရေးနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်လို့ ဒီကိစ္စကို မသိရှိခဲ့ဘူးဆိုရင့်တောင်မှာ အခုတော့ သိသင့်ပါပြီးခင်ဗျာ။ အဲဒါကြောင်း သားသမီးမကောင်းရင် မိဘခေါင်းဆိုသလို့ အစ်ကိုရဲ့သမီးကို သမိုင်းစာအုပ်တွေပေးဖတ်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးကို သိဖို့
ဇန်န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ (YPI) (တောင်ကြီးထောင်မှ
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့ ကိုမြအေး
ခေါင်းစဉ်လိုက် ။...။ ပေစာများ
၂၁ ရာဇုထက်ဝက်က ရိုဟင်ဂျာတဲ့
၂၁ ရာဇုခေတ်ရဲ့ မီဒီယာ
BBC ရဲ့ Update ဖြစ်တဲ့သတင်းက
BBC ရဲ့ ဝိုင်းတော်သားတွေကတော
ဗလီများကို ဖျက်ဆီးသိမ်းပိုက်ပြီ ဘုရားတည်ထားသည်ဟု ရိုဟင်ဂျားများမှ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်၍ ကန့်ကွက်လွှာတင် (ပေးစာ - ၃၉)
တင်ပြသူ ။.....။ . ။.....။စာတင်ချိန် ။...။ Sunday, January 15, 2012
ပြသာနာ၏ မူလရင်းမြစ်မှာ အယူဝါဒကျဉ်းမြောင်းသော ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒီများ၏ သမိုင်းကြောင်း အမှန်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင် အမှန်တရားကို လက်မခံလိုစိတ်ကြောင့် ဟိုးရှေးပဝေသဏီကတည်းက အတူတကွ လက်တွဲနေထိုင်လာခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအား ကြောက်စိတ်၊သံသယစိတ်ဖြင့် ကြည့်ရှု မြင်ယောင်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခေါင်းစဉ်လိုက် ။...။ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းစုစည်းမှု, ပေစာများ
Dictionary စုစည်းမှု (8)
Virus Program စုစည်းမှု (5)